Dhaabbata Dhimmoota Imigreshiniifi Lammummaa: Paaspoortii kennuu hin dhorkamne - BBC News Afaan Oromoo
Yunivarsitii Finfinneetti barrattuu wallaansa fayyaa waggaa arfaffaa kan taatee Kuulanii Mireessaa yaa'ii yunivarsitii biyya Naajeriyaatti argamu irratti hirmaachuuf affeerraa argatte.
Faakaaltii itti barattu irraa koree barattootaa bakka bu'uun gara Naajeeriyaatti imaluuf paasportii baafachuuf gara Dhaabbata Dhimmoota Imigireshiniifi Lammummaa waan na barbaachisan jette amante waraqaa eenyummaa kan gandaafi kanfaltii qabachuun dhaqxe.
Obboleettii ishee waliin ta'anii gara Dhaabbata Dhimmoota Imigrashiniifi Lammummaa kan deemte Aadde Galaanee Galataa ofii isheetiifi haaromsiifachuuf obboleettiin ishee ammoo paaspoortiii haarawaa baafachuuf torban lamaan dura deemanii kan isaan mudate akka isaan keessumeessuu hin dandeenyedha.
Itoophiyaan viizaa Afirkaanotaaf battaluma seenaniin kennuuf
Paaspoortiin guddina dinagdee waliin hariiroo maalii qaba?
Gatii paaspoortii doolaara miliyoonaan
Akka jettutti maatii gaafachuuf kan deeman yommuu ta'u obboleettiin ishee ammoo intalli ishee waan deessuuf gargaaruuf ture kan biyya alaatti imalaaf paaspoortii baafachuun isaan barbaachise.
Xalayaa qaama afeere irraa maaliif barbaachise?
Haata'u malee waajjirichaan hanga qaama si afeere irraa xalayaa hinfidanetti paasportii baafachuu akka hindendeenye itti himame.
Paasportii argachuun baayyee rakkisaa akka ta'ee himamaa jiraatulleen, paasportii argachuun mirga lammilee hundaa waan ta'eef akka hindhorkamne Itti-aanaa Itti-gaafatamaan Dubbi Himaa Qajeelcha Muummee Dhaabbatichaa Obbo Yemaanee Gabramasqal BBC'tti himaniiru.
Mootummaan Itoophiyaa biyyoota Giddu-gala Bahaa sadii waliin waliigaltee taasiseera kan jedhan Obbo Yamaaneen Kanneen hafan waliinis waliigaltee raawwachuuf hojjechaa jiraachu ibsaniiru.
Mootummaan imalawwan gara biyyoota kanneeniitti seeraan ala taasifamaa turan dhaabeera kan jedhan Ittigaafatamaan kun, haata'u malee kan seera qabeessa fakkaatan garuu seeraan ala taasifamaa turaniiru jedheera.
Kanaafuu kaayyoon dhaabbatichaa inni tokko nageenyaafi lammiilee sochiilee seera qabessa ta'an mirkanneessuu, akkasumas imalawwan karaa seeraatiin taasifamu cimsuu ta'u himaniiru.
Obbo Yamaaneen akka jedhanittis, sochiin dhaabbata isaanii kunis labsii gama motummaafi Waajjira Dhimma Hawaasummaafi hojjataa irraa dhufe kan bu'ureffateedha.
''Bakka fedhan deemuun mirga lammiilee seeraan kabajamedha. Dhorkaa hinjirru, dhorkus hindandeenyu. Nageenya lammiilee mirkanneessuun garuu aangoo dhaabbatichaati'' kan jedhan Obbo Yamaaneen, ammas taanaan haalli kenninsa paasportii haaluma seera hordofeen raawwatamaa jira jedhaniiru.
Paasportiin sanda imalaati malee waraqaa eenyummaa gandaa bakka kan bu'u miti kan jedhan Ittigaafatamaan kun, dameewwan waajjira isaanii dabalatee guyyaatti paasportii kuma 10 ta'u akka kennamu himu.
Haata'u malee kanneen itti fayyadama muraasa qofa yoo ta'an kuun paaportii isaanii dalaalaaf kennuun irra deebiin kan baasaniidha jedhu.
Haaluma imala isaanitiin sanadawwan imaltoonni dhiyeessu qaban yoo dhiyyeefatan paasportii ni argatus jedhaniiru.
Dhimmoota paasportii baafachuuf barbaachisan keessaa tokko waraqaa eenyummaa gandaa yoo ta'u, isaan hojiif gara boyyoota jiddu gala bahaa deemaniif ammoo ulaagaa barbaachisan gutuusaanii mirkanneessuuf ragaa dhiyeessu qabaatu jedhu.
Dowwannaaf gara biyya biraa kan imalan yoo ta'e ammoo viizaa, xalayaa dowwannaa, hoteela qabachuufi tikeettii xiyyaaraa kutataniif ragaa dhiyeessuun irraa eegama.
''Kanneen wallaansaaf biyya alaa deemaniifis keessattu kan atattamaa guyyaa tokko ykn lama keessatti paasportiin ni kennama jedhaniiru. Garuu ragaa hospitaala biyya dhaqaniifi kan hakimoota biyya keessaatiin barraa'eef dhiyeessu qabaatu.
Itti-gaafatamaan kun akka jedhaniiti, paasportii haaromsuufis adeemsi isaa walfakkaataadha. Adeemsi dhaabbanni isaanii ammaan tana hordofaa jiru kunis keessumatu imala seeraan alaa gara boyyoota Giddu-gala Bahaatti taasifamaa jiru to'achuufi ittisufiidha.
9 Onkololeessa 2018
Shiwaazingar Afrikaa Kibbaatti ‘dhiitame’
Saantimni warra Roomaa durii Ingilaanditti argame
''Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa agarsiisuun barbaada''
Hojjetaan CIA duraanii Chaayinaaf iccitii kenne hidhame